MOV ka MP3 Mac - Olee otú iji tọghata MOV ka MP3 on Mac (Mavericks gụnyere)
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata MOV ka MP3 on Mac (Yosemite gụnyere)
M mkpa enyemaka ụfọdụ na ihe. M na-eche ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ na-audio nke a QuickTime MOV na dị nnọọ nwere ọdịyo dị ka a MP3 faịlụ? Dị ụzọ ọ bụla m pụrụ ime ya? Daalụ.
Dị n'elu ka ajụjụ na-egosi, mgbe ụfọdụ anyị na mkpa ọdịyo na ụda nke a video faịlụ nke mere na anyị nwere ike na-etinye ha n'ime ụfọdụ MP3 Player. Ma n'ebe a, anyị ga-amasị inye a mara mma ụzọ dị mfe iji tọghata MOV ka MP3 Mac, dị nnọọ enyere gị aka wepụ audio dị ka MP3, AAC, adaka si QuickTime MOV video on Mac OS X gụnyere Snow agụ owuru, odum na Mountain odum.
MOV ka MP3 Ntụgharị Mac bụ ihe dị mfe na-eji MOV ka MP3 convertor-enyere gị aka tọghata MOV ka MP3 format, nakwa dị ka AAC, adaka, AC3, WAV, MKA, WMA na ndị ọzọ na-ewu ewu ọdịyo faịlụ formats on Mac. Ebe a bụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu maka gị. Akpa, biko ibudata software, wụnye na ẹkedori ya. Na mgbe ahụ na-amalite ịrụ MOV ka MP3 akakabarede.
Free download MOV ka MP3 Ntụgharị Mac (Mountain Odum, odum akwado)
Olee otú iji tọghata MOV ka MP3 on Mac OS X (Mountain odum akwado) nzọụkwụ site nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1. Ibu Ibu MOV videos ka Mac MOV ka MP3 Convertor
Dọrọ na dobe videos-ekpe ebi ndụ ma ọ bụ pịa File Tinye Video Files iji họrọ MOV videos na kọmputa gị. Ị na-ekwe mbubata ọtụtụ MOV faịlụ na oge. I nwekwara ike wepụ MP3 site na ndị ọzọ video faịlụ dị ka WMV, MKV, AVI, FLV, MTS, VOB, wdg na Mac OS X. Tụkwasị videos nwere ike previewed na nri ị na-elele window. Ị nwere ike ịdọrọ na dobe otu video thumbnail ọzọ ka jikota videos.
Nzọụkwụ 2. Nịm mmepụta format dị ka MP3
Na nke a smart MOV ka MP3 Ntụgharị Mac (Mountain odum akwado), pịa format image bọtịnụ na ala ebi ndụ, na mgbe ahụ họrọ MP3 dị ka mmepụta format si Audio taabụ. I nwekwara ike ewepụtụ audio ogologo site na ịpị Kpaa bọtịnụ.
Nzọụkwụ 3. Malite iji tọghata MOV ka MP3 usoro na Mac
Pịa mmepụta na ala ekpe nke usoro ihe omume window iji họrọ otu mmepụta ndekọ n'ihi na gị videos na iti tọghata na-amalite MOV ka MP3 akakabarede on Mac OS X (Mountain Odum, odum gụnyere).
Mgbe ihe ndị a atọ nzọụkwụ mere, i nwere ike na-enweta MP3 si MOV on iPod ịkpọgharịa, iPhone, iMovie, Final Cut Pro na ndị ọzọ na MP3 Player ma ọ bụ editọ.
Cheta: Nke a MOV ka MP3 Ntụgharị Mac nwekwara ike tọghata videos dị ka AVI, MP4, mpg, WMV, FLV, MKV, MTS, VOB, wdg ma wepụ audios si videos. Ọ nwere ike tọghata videos na audios na-dakọtara na iDVD, iMovie, iTunes, QuickTime, Final Cut Pro, PPT, Adobe Premiere Pro, iPad, iPhone 4, iPhone, iPod aka 4, iPod nano, wdg na i nwere ike ịkọrọ converted vidiyo na YouTube, Facebook, Myspace, onwe gị blog, na na.
Top Nine Xilisoft 3D Video Ntụgharị Alternatives